IMuti – The Ulwazi Programme
IMuti Market , eseWarwick Triangle eThekwini
UMuthi (muti) igama lemithi yendabuko eSeningizimu ne-Afrika enyakatho njengeLake Tanganyika. Igama elithi muti lisuselwa egameni lesiZulu elisho umuthi, okuyimpande yawo -thi. Imithi yesintu yase-Afrika isebenzisa imikhiqizo ehlukahlukene yemvelo, eminingi yayo etholakala ezihlahleni. Ngalesi sizathu, umuthi ngokuvamile waziwa ngokunyanga, kepha ubuye usetshenziswe ekwelapheni kwendabuko. Eningizimu ye-Afrika, igama elithi umuthi lisetshenziswa kabanzi ezilimini eziningi zomdabu zase-Afrika, kanye naseNingizimu Afrika isiNgisi nesiBhunu lapho kwesinye isikhathi lisetshenziswa njengegama elisho umuthi jikelele.
Ukuchazwa kwegama/ Indlela yokubiza leli gama
Leli gama lingelesigaba se-umu / imi, ngenxa yalokho ubunye (isihlahla) bunikezwa umuthi futhi ubuningi (izihlahla) umuthi. Njengoba ukubizwa konkamisa bokuqala balesi sigaba se-umu / imi sebizo lesiZulu, kungacindezelekile, umuthi uma uwodwa kwesinye isikhathi uzwakala njengo-‘Muthi ‘. Leli gama lihunyushwa ngokuthi umuthi ngenxa yemiphumela yomlando wesipelingi sase-United Kingdom British Colonial.
EsiNgisini nasesiBhunwini esivamile leli gama lingasetshenziswa ngalendlela elandelayo:
isiNgisi: “My doctor gave me some muti for my sore throat.”
isiBhunu: “My dokter het vir my muti verskaf vir my seer keel.”
Categories Culture, Environment Tags Ezempilo, Izitshalo zokwelapha, Umuthi